2021 Gemini Horoscope - Gemini
I-Gemini Horoscope yoNyaka ka-2021 x
Umoya:Uvuyo, Ubuntwana, Ukuzihlonipha, Okutsha.
Iindawo zokundwendwela emva kobhubhane:I-Indonesia, iZiqithi zaseFaroe, eKhanada.
Izinto onokuzifunda:Ukunyuka kweRock, ukuDanisa iSalsa, ukuvumisa ngeenkwenkwezi.
Ngaphandle komdaniso omdala kunye nentsha, eyoyiswayo kunye ne-eccentric, isithethe kunye nenkululeko, iGeminis sele iza kuvusa ihlabathi labo lomoya kunye neemvakalelo zabo zityhalwe ukuba zibe yinto ephambili kaninzi ngo-2021. Isithembiso sekamva siza kunye nesiqalo. zonyaka, kodwa iinyanga eziliqela zokuqala aziyi kuba lula, nkqu nenkxaso eyomeleleyo yengqondo yabo ekhawulezayo kunye nokuguqulwa kweSaturn kunye neJupiter kwi-Aquarius. Iinkolelo ziyabunjwa ngokutsha kwaye kufuneka zitshintshwe ukuze zilungele inkululeko ethe chatha kwimiba yentliziyo kunye nokhetho oluzenzekelayo nolukhululayo, endaweni yokuba lulumke kwaye lube nengqiqo kuphela.
Intliziyo ayisayi kuphinda iyinyamezele imfuno yakho yokucinga kakhulu okanye ukungxamela kwiingcaciso ezinokuthi zinikwe yingqondo ngelixa uzama ukufihla iimvakalelo ezigqumayo phantsi komhlaba. Ungaphinda uyeke, wenze ubumdaka okanye ezimbini, uleqe kuhambo olugqithisileyo, oluyingozi, okanye oluphambeneyo, kwaye ubone ukuba iziphumo zirhabaxa na njengoko ubucinga ukuba ziya kuba njalo. Mhlawumbi kungcono ukubonakala usisidenge okanye ungekho ngqiqweni kunokuba ubambeke, kude neenkqubo ezinyanisekileyo ekufuneka uziqwalasele ngaphakathi. Sele unoxanduva olwaneleyo emagxeni akho njengoko kunjalo. Thatha ixesha lezinto ezisileyo eziya kukwenza ube nemincili kwaye zikwenze uncume. Akukho nto incoko echanekileyo kunye nobuhlobo obukhuthazayo obugcwele uburharha abukwazi ukuphilisa kwiinyanga ezilandelayo.
Ukhawuleza kakhulu ukuba kulunge kuwe. Amandla enyathelo lokuqala kunye nengqiqo eqhelekileyo ozama ukuyityhala kubonakala ngathi azanelanga kwiimeko kunye neemeko zangoku. Le ngxaki sele iza kufikelela kuvuthondaba ngoJuni, xa unokuba nengxaki yokwenyani yokugxila kuyo nayiphi na into enemveliso, ngakumbi ukuba uthandana okanye uziva ukhuthazwa ukwenza izinto ezintlanu ngaxeshanye. Inyaniso ekungqongileyo kufuneka yamkelwe njengoko injalo, kwaye ixesha obuya kulichitha kwimizabalazo yomsebenzi owakhayo linokusetyenziswa ngokufanelekileyo ukuphumla kunye nemisebenzi evuyisayo umntwana wakho wangaphakathi azabalazela ngayo lonke ixesha. Sebenzisa naliphi na ixesha ukuphumla kwaye uzinike imvume yokuncuma, wenze into enobuchule, kwaye uzise umbala kwindawo yakho yemihla ngemihla.
Ixesha lihamba kwaye lifundisa izifundo ezinkulu kunokuba zibonakale ekuqaleni. Ekupheleni konyaka umsebenzi wakho unokucaca kwaye iminqweno yakho isendleleni ibonakale. Into ebibonakala ininzi kakhulu ekuqaleni iya kuba kuphela kwendlela onqwenela ukuyilandela. Hlala unomdla kwaye ubone ukuba ulwakhiwo osele unalo lunokusebenzisa njani ukhetho olungaphandle kwebhokisi, olubonakala lungekho ngqiqweni, kwaye ngaphandle kwayo yonke into enokuvunyelwa yindawo okungqongileyo. Usendleleni yokuba ube ngcono kuwe - kuwe.
Ngelixa ubizelwe ukuba uhambe imigama emide kwaye wandise i-horizons kwinyathelo ngalinye lendlela, zonke izinto ozifundayo zinokuba zininzi kakhulu ukuba isisu sakho singasebenza kunye nokuba umzimba wakho uphathe. Udinga isiseko sakho somelele kwaye uhlale ugxile, ngakumbi ekupheleni kwentwasahlobo xa ukhuseleko lwakho luya kube luphantsi kwaye umzimba ufuna ukuphumla, ilanga kunye nokukhulula zonke iintlobo. Phumla eso sisu ngalo naliphi na ixesha osikhumbulayo, danisa ujikeleze indlu ukuze uhlale usebenza, kwaye wenze into elungileyo kumathumbu akho ngokukhetha ukutya okunempilo kwinxalenye encinci imini yonke.
Iimfazwe ze-Ego ziya kubalalisa kwiinyanga zokuqala zalo nyaka. Zama ukungazithatheli izinto ngokwakho njengoko akukho lulindelo lulingana nengqondo yakho ngcono kunoko kunikelwa yinyani ngokucacileyo. Kubalulekile ukuba ungasisebenzisi kakubi esakho isantya sokutsibela kwizigqibo, ngakumbi nabahlobo abalungileyo kunye nabantu onokuthetha nabo ngokuphandle. Imiba yosapho inokubekelwa bucala okwexeshana kunye nelizwe lakho elisetyenzisiweyo kunye neemvakalelo zakho zigcinwe njengezakho kuphela. Zama ukungabandakanyi kwaye unqumle abantu ebomini bakho ngaphandle kokuzama ukubeka imida ecacileyo kunye nabo kuqala. Xa kufika ixesha lokucacisa iinkolelo zakho zobuqu, wonke umntu ngokuqinisekileyo uya kushukunyiswa emagxeni akho, kunye nolindelo olungekho ngqiqweni ekungekho mntu unyanzelekileyo ukuba ahlangabezane nalo.
IGemini engatshatanga inokudibana nomntu omtsha okanye ukuthandana nomhlobo olungileyo, umntu okude okanye umntu ongafikelelekiyo. Kubalulekile ukufumana inkuthazo kwaye uzike kwiimvakalelo ezivela ngentliziyo evulekileyo ukuze ufumane uninzi lwazo kwaye uyonwabele nokuba zingahlala ixesha elide kangakanani. Iinguqu ezinzulu kubume bakho bobudlelwane okanye amabali othando anokulindelwa ngo-Okthobha xa iimvakalelo ziya kuthi ekugqibeleni ziqale ukwenza ingqiqo ngakumbi njengoko ingqondo yakho icotha ukuze ivumelane nabo. Khetha ukuba nomhlobo olungileyo phezu komdlalo ongabalulekanga kwaye uzame ukuba ungakhukuliswa kunxibelelwano olungabandakanyekanga ngokupheleleyo kwintliziyo yakho.
Ngelixa umsebenzi uza kuba namahla ndinyuka, imali ayiqali kakuhle kwaye ezinye iintlawulo zinokulahleka okanye zilahleke. Ukuziva uxabisekile kunokushukunyiswa ziziganeko zangaphandle kunye nendlela abanye abantu abakubona ngayo ukuzibophelela kwakho. Kubalulekile ukuma uqinile kwisikhundla sakho kwaye ubone okuhle oza kuzisa kulo naliphi na iqela okanye indawo osebenza kuyo. Ukuba awaziwa ngomgangatho, unokudlulela kwinto eyahlukileyo ngokupheleleyo. Jongana nempumelelo yakho kwaye uqiniseke ngekamva oza kulidala endaweni yokuba ubambelele kwiimeko ezingabalulekanga ezikwenza ube neentloni nangayiphi na indlela.
Umhlaza Emanzini Itaurus Khetha Uphawu I-Capricorn